မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: I'm so sorry... but I love you, my readers... ^_*
Posted by mabaydar at 12:34 PM
waiting your post ma baydar.pls carry on.
1/22/2011 2:19 PM
ပြီးရင်တော့ mc လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံလေး ရေးပါ။
ဘာရေးရေး ရေးသာရေးပါ။ စိတ်ဝင်စားသူတွေဖတ်မှာပေါ့ ။ ကိုယ်တို့ လို ကိုရီးယားကားတွေ မကြည့်ဖြစ်တဲ့သူတောင် မဗေဒါရေးတာ ဖတ်လိုက်ပီးရင် သိရတာပေါ့ တကူးတက ကြည့်တာ ထက်တောင်အသေးစိတ်သေးတယ် ရေးတာက ဟိ ။ သတင်းတွေလည်းလိုက်ရှာနေစရာ မလိုတော့ဘူးလေ။
1/22/2011 4:29 PM
Bravo Ma bay dar,
I am ur regular reader. Carry on
Ur haters :P